Swiiti anwụrụ Ọkwa 3914 aghụghọ na Atụmatụ - Egwuregwu swiiti anwụrụ - Free Ndụ Ndụ Atụmatụ Ndị na-egosi
Ị nọ ebe a: Ulo / Uncategorized / Swiiti anwụrụ Ọkwa 3914 aghụghọ na Atụmatụ
Last updated on Julaị 6, 2021 Site na Isobella Franks Leave a Comment
Na 90's anyị na-anụ nwere ezumike, nwere KitKat! Ekwesịrị ịgbanwe akpaokwu a ugbu a ka ọ nwee ezumike iji kpọọ swiiti anwụrụ. Egwuregwu a aghọwo ihe a ma ama n'etiti ọgbọ niile nke na ị nweghị ike ịhapụ onye ọ bụla na ya. Agụụ egwu egwu ya na-abawanye kwa ụbọchị. Ozugbo ịbanye na ekwentị onye ọ bụla, ị ga-ahụ ngwa a n'ezie. Onye ga-anọ na ọkwa mmalite; ndị ọzọ ga-abụ pro na ya mana ị maara ihe ga-abụ akụkụ kachasị? Onye ọ bụla ga-arapara n'otu ọkwa. Ha ga na-achọ ihe ga-enyere ha aka imeri ọkwa a. Yabụ ebe a ka anyị na-ebute gị Swiiti anwụrụ larịị 3914 aghụghọ na Atụmatụ maka enyemaka gị.
Echiche dị n'azụ ọkwa a bụ iwetulata ihe niile dị na ọkwa a wee ruo n'ọkwa dị egwu 20,000 isi iji mezue ọkwa a. Maka nke a, ha enyewo gị 25 mmegharị nke na-adịghị ọtụtụ ya kpachara anya mgbe ị na-eme ha? Na mkpokọta ị ga-emeso 2 ihe eji eme ihe. Ọ bụrụ na ị nweta akara 20,000 isi ma weta ụdịdị niile nke ihe abụọ ahụ, mgbe ahụ naanị gị ga-enwe ike mezue ọkwa a ma kwụsị nchegbu gị. Iji merie nchegbu gị, anyị na-enye gị ndị aghụghọ na ndụmọdụ nke swiiti crush 3914.
Cheta na ihe isi ike dị larịị siri ike ka ị ga-anọ na mkpịsị ụkwụ gị mgbe ị na-egwu egwu a. Echiche kachasị mma site na swiiti anwụrụ larịị 3914 aghụghọ na Atụmatụ ga - amalite site na ala osisi ebe ọ ga - enyere gị aka inweta swiiti pụrụ iche. Nwere ike iji candies gị nke chara acha iji kpochapụ ihe ndị dị na bọọdụ ahụ.
Nzọụkwụ mbụ gị kwesịrị ịkwaga ịkwatu waffles dị ka o kwere mee. Gbalịa ịkwaga ihe ndị ahụ na ogidi aka nri ha.
Ozugbo i mechara nke ahụ, ịkwesịrị ịme candies pụrụ iche. Gwakọta swiiti ndị ahụ pụrụ iche ị mebere wee gbalịa imebi licorice niile, na-agbagharị, chocolates na waffles.
Echiche dị n'azụ imebi ihe ndị a niile iji wedata ihe niile sitere n'aka ekpe gaa na ala aka nri. N'otu aka ahụ, Ịchọrọ ka ihe ndị ọzọ sikwa n'elu gaa n'aka ekpe na etiti gaa n'akụkụ aka nri. Site n'ime nke a, ị ga-enwe ike ikpochapụ ha na osisi.
Ọ bụrụ na ị nwere ike nweta ihe ndị a pụọ ​​​​na bọọdụ n'ime mmegharị ahụ ekwuputara i.e. 25 Nkea, mgbe ahụ naanị gị nwere ike mezue ọkwa ahụ. Ọ bụrụ na ịgagharịghị nzọụkwụ site na nzọụkwụ, ị ga-anọgidesi ike na ọkwa a ogologo oge. Weta ihe niile dị n'akụkụ aka nri ha iji wepụ ha site na candies pụrụ iche. Ọ bụghị nke a dị mfe? Naanị jiri ndụmọdụ anyị nyere n'isiokwu a wee hụ anwansi. Ị ga-enwe ike dozie ọkwa gị n'otu oge. Nke a bụ ịma mma aghụghọ anyị.